ဘုတ်ငှက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘုတ်ငှက် သည် ဥဩမျိုးနှင့်အတူ "ကျူကျူ လီဒီး" မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ပါဏဗေဒ အလိုအားဖြင့် "စင်ထရို ပတ် ဆိုင်နင်ဆစ်" ဟုခေါ်သည်။ ဥဩနှင့် မျိုးတူသော်လည်း ဥဩကဲ့သို့အခြားငှက်၏ အသိုက်တွင် ဥအုလေ့မရှိ။ မိမိ အသိုက်နှင့် မိမိဥအုသည်။ တောကျီးကန်းအရွယ် အလျား ၁၈ လက်မရှိ၍ ကိုယ်မှာ တောက်ပြောင် မည်းနက်ပြီးလျှင် အတောင်သည် အုန်းခွံရောင် နီကျင့်ကျင့် ဖြစ်သည်။ အတောင်နှင့် အမြီးသည် ကြီး၍ လေးလေးပျံတတ်သည်။ အဖိုနှင့်မ ပုံသဏ္ဌာန်ချင်းတူသည်။
ဘုတ်သည် ပုန်းလျှိုးနေ၍ မြေပြင်ပေါ်တွင် အစာ ရှာစားသည်။ အထူးသဖြင့် စိုက်ပျိုးခင်းနှင့် မြေကွပ်လပ် များတွင် အတွေ့ရများသည်။ ချုံထူ၍ စွတ်စိုသော နေရာများကို ကြိုက်နှစ်သက်၍ ရေနှင့် ဝေးဝေးမနေချေ။ တောတွင်းရှိ စမ်းချောင်း၊ ကမ်းပါးတစ်လျှောက် ပေါက်သော ကိုင်းတော၊ ဗိဇတ်တောများတွင် ပိုးကောင်များ၊ နှံကောင်၊ ဖွတ်၊ ပုတတ်၊ မြွေနှင့် အလားတူ အစာများကို ရှာဖွေစားကြသည်။
အစာရှာဖွေရာတွင် မြေပေါ်၌ အမြီးကိုမ၍ တည်ငြိမ်စွာ သွားလာနေသည်ကို တွေ့ရတတ်သည်။ အနှောင့်အယှက်နှင့် တွေ့သောအခါတွင် ထူးခြားစွာ ဖြည်းဖြည်းနှင့် မှန်မှန် မြက်တော၊ ချုံတောထဲသို့ပျံသွားလေ့ရှိသည်။ မိုးရွာပြီးစတွင် ဘုတ်သည် ချုံဖျား၌ ဖြစ်စေ၊ ဝါးရုံဖျား၌ဖြစ်စေ နှစ်ခြိုက်စွာ နေစာလှုံလေ့ရှိသည်။
ဘုတ်၏ အသံမှာ လေးနက်၍ အု-အု ဟုဖြည်းဖြည်း နှင့် မှန်မှန် အော်လေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် နွေဥတုတွင် အော်တတ်၍ အဝေးကပင် ကြားနိုင်သည်။ အော်သည့်အခါ အမြီးကိုမ၍ ဖြန့်ထားသည်။ ဦးခေါင်းသည် အောက်သို့စိုက်လာ ၍ လည်ချောင်းလည်းပွလာသည်။ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း တုန်နေ သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကု-ကု ဟုလည်း ၆ ကြိမ်မှ အကြိမ် ၂ဝ ခန့်အထိ အော်လေ့ရှိသည်။ တစ်ကောင်အော်လျှင် အနီး အနား တစ်ဝိုက် ဘုတ် များကပါ ဝိုင်း၍ အော်တတ်ကြသည်။
ဘုတ်သည် အသိုက်ကို ချုံဖုတ်၊ မြက်ဖုတ်၊ သစ်ကိုင်း ခွများတွင် ပြုလုပ်၍ မိုးဥတုတွင် သားပေါက်တတ်သည်။ တစ်မြုံလျှင် ၃ ဥမှ ၅ ဥအထိရှိ၍ ပုံသဏ္ဌာန်မှာ ရှည်မျောမျော ဖြစ်ပြီးလျှင် ကြမ်းတမ်းသည်။ အပြောက် အစက်မရှိချေ။
အရောင်မှာ အဖြူမွဲရောင် ဖြစ်သည်။ အဖိုအမ နှစ်ဦးလုံးပင် အသိုက်လုပ်ခြင်း၊ ဝပ်ခြင်းနှင့် သားငယ်များ ထိန်းကျောင်း ပြုစုခြင်းများကို ခွဲဝေလုပ်ဆောင်ကြသည်။
ဘုတ်များကို အရှေ့တိုင်း နိုင်ငံများတွင် အနှံ့အပြား တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံးတွင် နေ၍ အမြင့်ပေ ၄ဝဝဝ အထိ တွေ့ရတတ်လေသည်။
Greater Coucal Centropus sinensis in Hyderabad, India.
↑ Prodromus systematis mammalium et avium, p. 205.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘုတ်ငှက်&oldid=345952" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၀၁:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။